UBenjamin O. Davis - Tuskegee Airmen-iMfazwe Yehlabathi II
UBenjamin O. Davis, Jr. (owazalwa ngoDisemba 18, 1912 eWashington, DC) wathola udumo njengenkokeli yeTuskegee Airmen ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Wayeneminyaka emashumi mathathu anesibhozo engumsebenzi ngaphambi kokuthatha umhlala emsebenzini. Wafa ngoJulayi 4, 2002, wangcwatywa eMangcwabeni kaZwelonke we-Arlington.
UBenjamin O. Davis, uJr. wayengunyana kaBenjamin O. Davis, uSr kunye nomkakhe uElora.
Igosa likaMbutho we-Army yase-US, umdala uDavis waba ngumntu wokuqala wokuqala wase-Afrika-waseMelika ngo-1941. Ulahlekelwa ngumama eneminyaka emine ubudala, uDavis osemncinci wakhuliswa kwiinkalo ezahlukeneyo zemikhosi waza wabukela njengoko umsebenzi kayise waxhatshazwa yi-Army's segregationist nkqubo. Ngomnyaka we-1926, uDavis wayenamava akhe okuqala xa wayekwazi ukuhamba kunye nomqhubi waseBolling Field. Emva kokuhamba ngokukhawuleza kwiYunivesithi yaseChicago, wakhetha ukuqhubela phambili umsebenzi wezempi kunye nethemba lokufunda ukuhamba. Ukufuna ukungena kwiWest Point, uDavis wathola isigqibo esivela kwiCongress Oscar DePriest, ilungu elilodwa kuphela le-Afrika leMelika yeNdlu yabameli, ngowe-1932.
Nangona uDavis ethembele ukuba afunda nabo beza kumgweba ngokuziphatha kwakhe nangokwenza kwakhe ngaphandle kohlanga lwakhe, wabuyela ngokukhawuleza ngamanye ama-cadet. Ngomgudu wokumphoqelela kwi-academy, ama-cadets amthobela ukunyanga.
Ukuphila kunye nokudliwa yedwa, uDavis wanyamezela kwaye waphumelela ngo-1936. Nguye kuphela ophumelela kwisikolo sesine se-African-American, yena waba ngowama-35 kwiklasi le-278. Nangona uDavis wayefake izicelo zokungena kwi-Army Air Corps kwaye wayenemfundo efunekayo, wayephikisiwe njengoko bekungekho iinqununu zesebe.
Ngenxa yoko, wathunyelwa kwiRegi ye-Infantry ye-24 ye-Infantry. Isekelwe kwi-Fort Benning, wayala inkampani yenkonzo de kubekho kwiSikolo soMntwana. Ukugqiba ikhosi, wafumana imiyalelo yokufudukela kwi-Tuskegee Institute njengomqeqeshi we-Reserve Officers Training Corps.
Njengoko iTuskegee yayikholeji yase-Afrika yase-Afrika, isikhundla sasivumela i-US Army ukuba ibenze i-Davis kwindawo ethile apho engenakuyalela khona imikhosi emhlophe. Ngomnyaka we-1941, ngeMfazwe yehlabathi yesibili ejikeleza ngaphesheya kwelanga, uMongameli uFranlin Roosevelt kunye neCongress balele iSebe lezoMbutho ukuba lenze i-unit black-flying flying unit kwi-Army Air Corps. Ukuvunyelwa kwiklasi yokuqeqesha yokuqala kwi-Tuskegee Army Air Field, uDavis waba ngumqhubi wokuqala wase-Afrika-waseMelika kwi-Airy Air Air Air. Ukuphumelela amaphiko akhe ngo-Matshi 7, 1942, wayengomnye wabahlanu abaqalayo base-Afrika nabaMerika ukuba baphumelele kule nkqubo. Uya kulandelwa ngamalunga angaphezu kwe-1 000 "iTuskegee Airmen."
I-99 yePursuit Squadron
Emva kokuphakanyiswa ekubeni ngu-lieutenant colonel ngoMeyi, uDavis wanikezwa umyalelo weyunithi yokuqala yokulwa emnyama, i-99th Pursuit Squadron. Ukusebenza ngokuwa kwe-1942, i-99 yaqala ukulungiselela ukukhusela emoyeni eLiberia kodwa kamva yayijoliswe kwiMedithera ukuxhasa le phulo eNyakatho Afrika .
Exhotywe ngeChartiss P-40 Warhawks , umyalelo kaDavis waqala ukusebenza ukusuka eTunis, eTunisia ngoJuni 1943 njengenxalenye yeqela lama-33 leFighter. Ukufika, ukusebenza kwabo kwakuncitshiswa yiloluhlu lwabahluleli kunye nezenzo zobuhlanga kwicala lomlawuli we-33, uColonel William Momyer. I-Ordered inxaxheba kwinqanaba lokuhlasela umhlaba, uDavis uholele iqela lakhe kwi-mission yokuqala yokulwa ngoJuni 2. Le nto yabona ukuhlaselwa kwe-99 kwisiqithi sasePellelleria ekulungiseleleni ukuhlasela kweSicily .
Ukuqala kwe-99 ukuya kwehlobo, amadoda kaDavis ayenze kakuhle, nangona uMamyer abike ngenye indlela kwiSebe leMfa waza wathi abaqhubi be-African-American baphantsi. Njengoko i-US Army Air Force ihlolisisa ukudaliswa kwamanyunithi amnyama onke, i-US Army Chief General Staff uGeorge C. Marshall wayala umbandela owawufundwayo. Ngenxa yoko, uDavis wathola umyalelo wokubuyela eWashington ngoSeptemba ukunikela ubungqina phambi kweKomidi elicebisi ngeNkqubo zeNigro Troop.
Ukukhulula ubungqina obunomdla, wavikela ngokuphumelelayo irekhodi lokulwa kunye ne-99 kwaye wavula indlela yokwakhiwa kweeyunithi ezintsha. Umyalelo owanikwayo we-332nd Fighter Group, uDavis walungiselela iyunithi yeenkonzo ngaphandle kwelinye ilizwe.
I-unit of new-black-squadron, kuquka i-99, i-unit entsha kaDavis yaqala ukusebenza ukusuka eRamitelli, e-Italy ngasekupheleni konyaka ka-1944. Ngokuhambelana nomyalelo wakhe omtsha, uDavis wakhuthazwa ukuba abe ngu-colonel ngoMeyi 29. Ekuqaleni wayexhotyiswe nge Bell Bell-Airacobras , i-332 yatshintshela kwiRiphabliki P-47 I-Thunderbolt ngoJuni. Ehamba phambili, uDavis ngokwakhe wabakhokelela kwii-332 kwiihlandlo eziliqela ezibandakanya ngexesha lokuthunyelwa kwee-escort apho yabona i- Consolidated B-24 i-Freerators i- Munich. Ukutshintshela kwi- North American P-51 Mustang ngoJulayi, i-332nd yaqala ukufumana idumela njengenye yeeyunithi eziphambili zokulwa. Eyaziwa ngokuba yi "Red Tails" ngenxa yamanqaku ahlukeneyo kwienqwelo zabo, amadoda kaDavis ahlanganisa irekhodi elimangalisayo ekupheleni kwemfazwe eYurophu kwaye iqhubekile njengezibhamu. Ngethuba lakhe eYurophu, uDavis wagijima umkhosi wee-60 kwaye wawaphumelela iSiliva yeSiliva kunye noMoya oPhezulu oPhezulu.
NgoJulayi 1, 1945, uDavis wathola amagosa ukuba athathe umyalelo weqela le-477th Composite Group. Ukubambisana ne-99th Fighter Squadron kunye nabasebenzi abamnyama-617th no-618th Bombardment Squadrons, uDavis wayenomsebenzi wokulungiselela iqela lokulwa. Umsebenzi wokuqala, imfazwe iphelile ngaphambi kokuba iyunithi ikulungele ukuhambisa. Ukuhlala kunye neyunithi emva kwemfazwe, uDavis waguquka waya ku-US Air Force esanda kumiswa ngo-1947.
Ukulandela umyalelo kaMongameli uHarry S. Truman, owawunqamle umkhosi wase-US ngo-1948, uDavis wasiza ekudibaniseni i-US Air Force. Ngehlobo elilandelayo, waya kwiKholeji ye-Air War yaba ngowokuqala wase-Afrika-waseMerika ukuphumelela kwiikholeji zemfazwe yaseMelika. Emva kokugqiba izifundo zakhe ngo-1950, wayekhonza njengenhloko yeSebe loKhuselo loMbutho we-Air Force.
Ngomnyaka we-1953, ngenkqubela yaseKorea , uDavis wathola umyalelo we-51 Fighter-Interceptor Wing. Ngokusekelwe eSuwon, eMzantsi Korea, wagijima kwiNorth American F-86 Saber . Ngomnyaka we-1954, wajika waya eJapan ngenkonzo kunye ne-Thirteen Air Force (13 AF). Ukukhuthazwa ku-brigadier jikelele ngo-Oktobha, u-Davis waba ngumlawuli wecala le-13 AF kunyaka olandelayo. Kulo nxaxheba, wancedisa ekwakheni kabusha i-Chinaist force air force yaseTaiwan eTaiwan. Eyalwe eYurophu ngo-1957, uDavis waba ngumbongameli wabasebenzi kwi-12 ye-Air Force eRamstein Air Base eJamani. NgalooDisemba, waqala ukukhonza njengomphathi wabasebenzi, i-Headquarters US Air Force eYurophu. Ukukhuthazwa kuba yintloko ngokubanzi ngo-1959, uDavis wabuyela ekhaya ngo-1961 waza wacinga i-ofisi yoMlawuli weMandla kunye noMbutho.
Ngo-Apreli 1965, emva kweminyaka emininzi yenkonzo yasePentagon, uDavis wakhuthazwa ukuba ngu-lieutenant-general kwaye wabelwa njengenhloko yabasebenzi be-United Nations Command kunye namaForam ase-Korea eKorea. Kwiminyaka emibini kamva, wathuthela eningizimu ukuba athathe umyalelo we-Thirteen Air Force, owase-Philippines. Ukuhlala apho kwiinyanga ezililishumi elinambini, uDavis waba yiphini likomkhulu-mlawuli, US Command Strike Command ngo-Agasti 1968, kwaye wakhonza njengomphathi-oyintloko, uMbindi-Mpuma, iNtshona ye-Asia kunye ne-Afrika.
NgoFebruwari 1, 1970, uDavis wagqiba umsebenzi wakhe weminyaka engamashumi amathathu nesibhozo waza waphuma emsebenzini.
Ukwamkela isikhundla kwiSebe lezokuThutho lase-United States, uDavis waba nguNobhala weeNkonzo zoThutho kwi-Environment, Safety, kunye neMicimbi yabathengi ngo-1971. Ukukhonza iminyaka emine, wathatha umhlala-phantsi ngo-1975. Ngo-1998, uMongameli uBill Clinton wakhuthaza uDavis ukuba ahloniphe zakhe mpu melelo. Ukubandezeleka kwesifo se-Alzheimer, uDavis wasweleka kwi-Walter Reed Army Medical Centre ngoJulayi 4, 2002. Emva kweentsuku ezilishumi elinesithathu, wangcwatshwa e-Arlington National Cemetery njenge-red-tailed P-51.
US Air Force: jikelele uBenjamin Benjamin O. Davis, Jr.
Imbali Yenkcazelo: Benjamin Davis
Inkonzo yeSizwe yePaki: uBenjamin O. Davis
UAmina, uMthekazi weZazzau
Imfazwe Yehlabathi II: Ngokubanzi uKarl A. Spaatz
Quotes of Kennedy Quotes
Quotes Shirley Chisholm
TE Lawrence - Lawrence yaseArabia
Abalawuli Bamakhosikazi: AmaFaro Amakhosikazi aseYiputa
UMark Wood Park
I-Crystal Eastman, uMmeli
"Umfokazi", u-Full Length Length Play nguLarry Shue
Unqulo Nenzululwazi Ukuqhutywa Ngumfihlelo?
Ukuqala kweGitarari 101
Izilwanyana ezili-11 ezinobuthi (kunye ne-1 Bonus Plant)
I-CUNY yaseKrooklyn i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ikhontrakthi yokuziphatha kunye nezixhobo zokuHlola zokuziphatha
Ndicinga ntoni na? Imibala yePaint Paint House
USophie Kinsella (Madeleine Wickham) Iincwadi
ULilala Ali - I-Boxer engazange ilahlekelwe yimfazwe
I-15 ye-Funny Funny Crime Caper Movies